HIBRU 10 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (HI 10)
Ma iwu ahụ ezipụtaghị ihe nile. Iwu ahụ bụ nanị onyinyo gosiri ihe gaje ịbịa abịa, bụ ihe karịrị ya mma, nꞌihi na o zughị oke nꞌonwe ya. Nꞌihi nke a, iwu ahụ enweghị ike isite nꞌọchụchụ aja nile a na-achụ kwa afọ, ọtụtụ mgbe, mee ka ndị ahụ na-abịakwute Chineke zuo oke.
Ọ bụ nꞌihi ọnọdụ dị otu a ka Kraịst nꞌonwe ya, mgbe ọ na-akwado ịbịa nꞌụwa, ji gwa Chineke okwu sị, “Ị chọghị aja na onyinye, Nꞌihi ya i meela ahụ a nye m.
Mgbe ahụ ka m kwuru okwu sị, ‘Lee, abịala m Chineke, ime ihe ị chọrọ ka m mee.’ Nke a bụkwa ihe akwụkwọ iwu ahụ na-ekwu banyere m.”
Ebe ahụ ka ọ nọ ugbu a na-eche ka Chineke mee ndị iro ya nile ka ha bụrụ ihe mgbakwasị ụkwụ ya.
Nꞌihi nke a ụmụnna m, anyị nwere ike ugbu a ịga nꞌihu Chineke. Ọbara Jisọs emegheelara anyụ ụzọ ịbịaru Chineke nso.
Jisọs Kraịst emegheelara anyị ụzọ ndụ ọhụrụ. O mere nke a site nꞌinye ahụ ya ka ọ bụrụ ihe e tiwara dị ka akwa mgbochi ụlọ nsọ, nke nọchiri nꞌetiti anyị na Chineke.
Ugbu a anyị nwere Jisọs Kraịst dị ka onyeisi nchụaja anyị! Ọ na-achị nꞌụlọ Chineke.
Kama ihe fọdụrụ bụ ikpe ga-adị nꞌoge ikpeazụ. Chineke ga-ejikwa ọkụ na-ere girigiri repịa ndị nile na-eguzo imegide ya na okwu ya.
Mgbe ụfọdụ a kparịrị unu nꞌihu ọha, unu natakwara mkpagbu. Nꞌoge ọzọ unu soro ndị e si otu a mesoo mmeso guzokọọkwa.
Nꞌihi na akwụkwọ nsọ kwuru sị, “Nꞌoge na-adịghị anya onye ahụ na-akwado ịbịa ga-abịa.” Ọ gakwaghị ala azụ na nkwa ya.
Ma ndị ahụ e mere ka ha zuo oke nꞌihu Chineke site nꞌokwukwe ga-adịkwa ndụ site nꞌokwukwe. Ọ bụrụ na ha alaa azụ nꞌokwukwe ha ihe banyere ha agaghị atọ Chineke ụtọ.
Ma dị ka ọ dị, anyị abụghị ndị na-ala azụ si otu a laa nꞌiyi. Kama anyị nwere okwukwe, bụrụkwa ndị a zọpụtara.